Asimesabi siyamfuna – umqeqeshi kaMthalane - Bayede News
Umqeqeshi kaMoruti “Babyface” Mthalane umpetha we-International Boxing Federation (IBF) Flyweight, uphika eyokwesaba ukubhekana nengqwele yeWorld Boxing Council (WBC) uJulio Cesar “El Rey” Martinez waseMexico.
Ngokusho kukaCollin “Nomakanjani” Nathan oyimeneja abuye abe umqeqeshi kaMthalane, abahleli bempi bebebeke umhla zili-15 kuNcwaba ukuthi adudulane la madoda.
“Cha cha cha akulona iqiniso lelo,” kuphendula uNathan engxoxweni kaWhatsapp abe nayo neBAYEDE.
“Usuku oluphakanyisiwe beluzosifica singekho esimweni esihle. Ukhumbule ukuthi ukuziqeqesha kusamisiwe uHulumeni lapha ezweni ngenxa yokhuvethe. Silinde uNgqongqoshe Wezemidlalo uMnu uNathi Mthethwa asinike umhlahlandlela,” kusho yena.
UNathan uqhube wathi njengamanje bamatasa nokulungiselela usuku lapho uMthalane ezovikela ngendlela yemandatory okuchaza ukuthi uphoqwa ukuvikela kumuntu oqokwa inhlangano yebhande aliphethe. “Silwela ukuthi sithole impi ngoMandulo ezokuba lapha eNingizimu Afrika bese sibheka eyokuhlanganisa amabhande silwe naye uMartinez. Asimesabi nakancane. Uma ubheka kahle ngesikhathi uMartinez eqala ukulwa ngowezi-2015, uMthalane ubesegudlile njengoba wayeselwa impi yama-34.
Akanasimanga uMartinez njengoba irekhodi lakhe likhomba ukuthi usahlulwe kanye ezimpini ezili-17,” kusho uNathan sakuchoma.
UMartinez, olwa ngesandla sokudla noneminyaka engama-25 ubudala, waqala ukunakwa ngesikhathi eqeda ngobungqwele bukaCharlie Edwards waseBritain ngowezi-2015.
Kwaqala kwacatshangwa ukuthi uMartinez unqobile ngesikhathi unompempe emisa impi ngomzuliswano wesithathu kwazise u-Edward waguqa phansi ngedolo negilavu lehlele phansi eringini. Kodwa sekubuyekezwa ivideo kwabonwa ukuthi uMartinez wagadla u-Edward ngaphansi kwebhande. Kuthe uma u-Edward eselilaxaza ibhande, uMartinez wathola elinye ithuba lokuba umpetha weWBC. Waqhathwa noCristofer Rosales waseNicaragua owamnqoba ngomzuliswano wesi-9.
UMthalane uneminyaka yobudala engama-38 kanti usebuya koshukana nezinkunzi ezifana noNonito “Filipino Flash” Donaire wasePhillipines wodumo lokubutha izicoco zomhlaba eziyisi-8 zezinhlangano i-IBF, iWBC, iWBA neWBO.
Uqhoshe ngerekhodi lezimpi ezingama-41, wanqoba amahlandla angama-39 kanti usesheshe waqeda ngamadoda angama-26.
UMthalane usevikele lesi sicoco se-IBF amahlandla amathathu nokumenze waklonyeliswa ngeSpecial Achievement Award yile nhlangano yaseNew Jersey, e-USA.
Okumenze wachonywa ngophaphe lwegwalagwala ukuthi wabuya naleli bhande elwa kude naseNingizimu Afrika.
Waqala walinqoba ngo‘elethu’ wamaphuzu edlula kuMuhammad Waseem wasePakistan empini eyayiseKuala Lumpur, eMalaysia, ngowezi-2018.
Usuke lapho wayodida isethenjwa saseJapan uMasahiro Sakamoto owasingqimuza ngomzuliswano weshumi eMacao, eChina, ngawo owezi-2018. Udlulele kumpetha waseJapan uMayasuki Kuroda abadudulane imizuliswano eli-12 kwathi amajaji ayinika yena. Eseqhathwe no-Akira Yaegashi, owayeqhoshe ngerekhodi lokuphatha izicoco zomhlaba ezisindweni ezintathu, izingqapheli zathi hleze usefike kwangqingetshe. Kodwa lo mlisa waseMpendle okhulelele eLindelani wakhombisa ubungcweti wamkhipha ukwazi uYaegashi ngomzuliswano wesi-9.
Uma wawungazi ukuthi loya mlisa waseJapan ungusomankomane wawungacabanga ukuthi utinyelwe izinyosi kwazise uma uthi nhla ubuso bakhe budumbile.